Iindlela ezili-9 zokusasaza imisitho yakho ye-B2B ngeTekhnoloji yoMsitho | Martech Zone
Entsha kwisitokhwe sakho seMartech: Isoftware yoLawulo loMsitho
Abacwangcisi bemisitho kunye nabathengisi baninzi ekufuneka bejongile. Ukufumana izithethi ezibalaseleyo, ukukhawulezisa umxholo owoyikekayo, ukuthengisa inkxaso-mali, kunye nokuhambisa amava awodwa abakhoyo kubandakanya ipesenti encinci yemisebenzi yabo yemihla ngemihla. Okwangoku, yimisebenzi ethatha ixesha elininzi.
Yiyo loo nto abaququzeleli beminyhadala ye-B2B besongeza ukongeza iTekhnoloji yoMsitho kwisitaki sabo seMartech. KwiCadmiumCD, sichithe ngaphezulu kweminyaka eli-17 sisenza kwaye sipolisha ezona zisombululo zesoftware kwimiceli mngeni yabacwangcisi bemisitho.
Namhlanje, siza kuqhekeza ezimbalwa zeenkqubo zabaququzeleli abanokuhamba kunye neTekhnoloji yeNdibano.
1. Qokelela kwaye uphonononge iiNkomfa
Omnye wemiceli mngeni emikhulu abacwangcisi bemicimbi ye-B2B bajongene nayo kukuthintela umxholo omkhulu. Sifuna izithethi ezikhuthaza intshukumo, ezifundisayo, nezonwabisa abo bezayo. Kubalulekile ukuba intetho nganye yesithethi ikwinqanaba kunye nomsebenzi wethu.
Ukubeka umnxeba wamaphepha yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa umxholo olungileyo womnyhadala wakho. Ukulawula konke ukungeniswa, nangona kunjalo, akukho lula.
Kulapho kungena khona iTekhnoloji yoMsitho. Yongeza ukungeniswa kunye nokuphononongwa kwesoftware, njenge Inqaku lamanqaku lesicatshulwa, kwisitaki sakho seMartech yindlela elungileyo yokulawula onke amagalelo oza kufumana.
Unokutsala kunye ikomiti yeengcali zeshishini ezinokuthi ziphonononge ukungeniswa kwaye zicebise umxholo. Nali inqaku indlela omnye umsebenzisi alonyuse ngayo inqanaba lokuphendula kwabavavanyi ukuya kwi-100%
2. Lawula abo Bathethi bePyky
Nje ukuba ukhethe umxholo womnyhadala, umceli mngeni olandelayo ukulawula izithethi. Izithethi zidume ngokuba nzima ukulawula. Ukulandela umkhondo nge-imeyile kunye neespredishithi yenye yeendlela zokwenza, kodwa ayilunganga.
Into yile, izithethi zixakekile. Bahlala beziingcali kwicandelo abalinikiweyo, kwaye banomsebenzi omninzi ongahambelaniyo nomsitho wakho. Rhoqo, abade bahlawulwe ukuze bathethe kumnyhadala wakho.
Itheko lobugcisa njenge Umvuni wenkomfa inokukunceda ukuba ulandelele izinto ezinokuhanjiswa kwaye ulandele izithethi zakho ngokufanelekileyo. Izithethi ziyakuxabisa oko, kuba bafumana uluhlu lwemisebenzi elula abanokuthi (okanye abancedisi babo) bayigqibe into ethile.
3. Cwangcisa kwaye ucwangcise iiseshoni
Iipredishithi nazo zinokuba luncedo cwangcisa kwaye ucwangcise iiseshoni zakho, kodwa kwakhona, ayilunganga. Itheko lobugcisa likuvumela ukuba ucwangcise kwaye wakhe ishedyuli ejikeleze umxholo owukhethileyo ngexesha lenkqubo yakho yokujonga kwakhona. Unokwabela izithethi kumagumbi okubonisa kunye nokulawula ulwazi ngenkqubo yolawulo lomxholo womnyhadala.
Elona candelo lililo kukuba oku kuhlaziya umxholo kwiwebhusayithi yakho yomnyhadala kunye neapp yomsitho, ukuze abo bakhoyo basoloko benokufikelela kumxholo nakwishedyuli yamva nje.
4. Thengisa iBooth Space kunye neNkxaso
Uninzi lweziganeko ze-B2B, ingeniso yenye yezona mpawu zibalulekileyo zempumelelo. Oku kuhlala kubandakanya ukuqhuba umboniso wezorhwebo okanye ukuthengisa amathuba abaxhasi. Ezi kunokuba ziintengiso zebhanile ezilula kwiwebhusayithi yakho yomnyhadala, iseshoni exhasiweyo, okanye imizobo kwibhasi yakho yeshatile. Idijithali okanye hayi - abacwangcisi beentlanganiso bafuna ukwandisa ingeniso yabo nangazo naziphi na izixhobo abanazo.
Umceli mngeni kukuba oku kubeka uxinzelelo olongeziweyo kuwe nakwiqela lakho lokuthengisa. Itheko lobugcisa lulula uxinzelelo. UJackie Stasch, uManejala oPhezulu wezoBudlelwane bezoMdibaniso, umzekelo, usebenzisa uMvuni weMiboniso kwi phumelela ukuthengisa ngempumelelo.
Ababonisi bayayixabisa le nto kuba banokuthenga indawo yokuhlala kunye nezinto zokuxhasa, emva koko bangenise abacwangcisi beeasethi ezixhasayo ezivela kubo, zonke endaweni enye. Kubacwangcisi, le yindawo efanelekileyo yokulandela umkhondo wokuhanjiswa kunye nokugcina iithebhu kulawo mathuba bawathengisileyo.
5. Lawula unxibelelwano ngaphambi, ngexesha, nasemva komsitho
Ukongeza ekulandeleni izithethi kunye nababonisi malunga nokuba yeyiphi imisebenzi ekufuneka yenziwe, kubalulekile ukuba ube nesitayile ngqo ukufikelela kwabo bezayo. Umnyhadala weTekhnoloji uza nezixhobo zonxibelelwano ezakhelweyo ngaphakathi njenge-imeyile kunye nohlelo lokusebenza lokutyhala. Unokwazi ukwahlula uluhlu ngokusekwe kwimisebenzi egqityiweyo kwaye uthumele umyalezo ngeetemplate zangaphambili ze-imeyile.
Kukho izixhobo ezinje nge UmcimbiBhala ukonyusa evumela abacwangcisi ukuba banxibelelane nabasebenzi kunye nabanye abathathi-nxaxheba kwisayithi, banike izithethi ukufikelela kwizixhobo eziphuculweyo zokungenisa umxholo ngomzuzu wokugqibela, kunye nokuthumela imiyalezo kwabo bezayo xa ishedyuli itshintsha.
6. Bandakanya abozimayo kwimisebenzi yesayithi
Uthethathethwano ligama elikhulu lokucwangcisa umsitho kwezi ntsuku. Ikwayinto abathengisi abayinqwenelayo. Ukuqhuba izinto ezinokulandelwa kubonisa ukuba iinkqubo zakho ziyasebenza. Ukusebenzisana nomxholo wakho kunye nabachaphazelekayo kubonisa i-ROI kubachaphazelekayo bangaphakathi nabangaphandle.
Nazi nje iindlela ezimbalwa ezikhawulezayo zokongeza iTekhnoloji yoMsitho kwisitaki sakho seMartech esinokunceda ukubandakanya abo bezayo:
Qhuba urhwebo lokubonisa indlwana ngokuhamba umzingeli wokutya.
Yandisa ukwamkelwa kweapp nge indlela yokuthengisa yeTech Tech yamajelo amaninzi.
Yabelana ngolwazi lwenkomfa kwaye uqhube amanyathelo athile kunye uphawu lwe digital.
Fumana iziphumo zexesha lokwenyani kunye nokunxibelelana nazo inkqubo yokuphendula kubaphulaphuli.
7. Yabelana ngesiqulatho nabaZimeleyo
Abathengisi bayalazi ixabiso lomxholo. Abathengisi abasebenzisa iminyhadala ye-B2B njengenxalenye yezicwangciso zabo bayazi ukuba uninzi lomxholo wenzeka ngexesha lokwenyani kwimisitho. Ukuba nendlela yokubamba nokusasaza loo mxholo kubantu abazimaseyo nakwabo bangayiyo ngokufanayo kubalulekile.
Yongeza iTekhnoloji yoMsitho njengenkqubo yeNkomfa kumnyhadala wakho, emva koko wabelana iividiyo ezinesandi esihambelanayo kunye nezilayidi ngeziko ledatha lakho yindlela entle yokwenza oku. Ukuba nejelo lokusasaza njengomsithoBhalisa iiWebhusayithi kunye neeapps kubalulekile.
Uninzi lwababekhona luya kuba sele lukhuphele usetyenziso, ke konke okufuneka ukwenze kukuthumela i-push push okanye i-imeyile kunye ne-voila !, Ababhalisi bakho banokufikelela kwangoko kuyo yonke imixholo yakho yenkomfa. Kufana nokuthatha iiseshoni zenkomfa yakho kwaye uphinde uziphindise njengezishumi okanye nakumakhulu eewebhu!
Qokelela & Uhlalutye iziphumo
Eyona minyhadala ye-B2B yimicimbi eqhutywa yidatha. Ukongeza iTekhnoloji yoMsitho kwisitaki sakho seMartech kunokukunceda uzise ukuqonda okutsha kwingxelo yakho. Ukulandelela ukhuphelo lweapps, umxholo wokulayisha, ubalo lwabantu, kunye nokunye kulula ngezixhobo ezinje myCadmium, umzekelo.
Ukuqokelela idatha esemgangathweni kunye nenani kubabekho kukwenziwa lula ngezixhobo zokuvavanya inkomfa ezinje Uphando lweMagnet. Abacwangcisi bemisitho kunye nabathengisi banokusebenzisa le datha ukwenza iimveliso ezintsha, ukuphucula amava abo bazimaseyo, okanye ukumisela iimfuno zomxholo kwimisitho yabo yexesha elizayo.
9. Khetha Abamkeli beMbasa
Iinkqubo zokuwonga ziyinxalenye enkulu yeziganeko ze-B2B. Ukuchonga nokuqonda iinkokeli zeshishiniUmzekelo, yindlela elungileyo yokuba yinkokeli yokucinga kunye nokuseka ukuba semthethweni malunga nomsitho weB2B. Umceli mngeni kukuhlela konke ukungeniswa kunye nokukhetha abantu abafanelekileyo.
Itekhnoloji yoMnyhadala, njengeKhadi lamanqaku amaBhaso, lulongezo olukhulu kwisitaki sakho seMartech. Ivumela abacwangcisi kunye nabathengisi ukuba lawula ukungeniswa, nika iijaji ukuba ziphonononge amaqela kwaye ukhethe abafumana ngokusekwe kwingxelo edityanelweyo.
Njengomcwangcisi womsitho okanye wentengiso, sele unako ukuba nexhala. Ukongeza iTekhnoloji yoMsitho kwisitaki sakho seMartech yindlela elungileyo yokuqokelela, ukulawula, kunye nokwabelana ngomxholo nabo bonke abathathi-nxaxheba ababandakanyekayo.
Itheko lobuchwephesha lizisa iminyhadala ye-B2B kunye, ilungelelanisa imisebenzi yakho yokucwangcisela umsitho kunye nokugcina ixesha kunye nemali yombutho wakho.
Fumana isicatshulwa somsitho wakho olandelayo
tags: Inkqubo yokuphendula kwabaphulaphuliulawulo lwebhasoMabhasoukuthengisa kweminqubacadmiumcdamabhaso enkomfaingxelo yenkomfaumvuni wenkomfaUkuphononongwa kwenkomfaukungeniswa kwenkomfauphawu lwe digitalamabhaso emisithoulawulo lomsithoisoftware yolawulo lomnyhadalaEvents ukonyusalawula imicimbiiiseshoni zokucwangcisaukuzingela okubiucwangciso lweseshoniUkucwangciswa kweseshoniulawulo lwesithethiisithethi samanqakuumazibuthe wophandoVumelanisa izilayidi
UMichael Doane ngumlobi, umthengisi, kunye nomqambi wewebhu oye wathandana nomzi mveliso. Kwi I-CadmiumCD Ufundisa abacwangcisi bemisitho malunga nezibonelelo zeTech Tech. Fumana ikopi yasimahla yakhe Inkqubela phambili kwiTekhnoloji yoMsitho, Ukufunda indlela iTeknoloji yezeMicimbi enokuyihambisa njani imisitho yakho ye-B2B.
Iingxaki ezi-5 eziPhezulu zeNkonzo yaBathengi (kunye nendlela yokuzilungisa)
Ngaba ukuThengiswa kweNkqubo kuthenga ukubulala igama lakho?